Technology | TeraNews.net |
Nyowani Xiaomi Mijia Wireless Fan
Analogue yeInternet nhare, nenzira yematerminals emota, iri kusimudzirwa neStarlink. Sevhisi "Portability" yakatarisana…
Tichifunga kuti 3D Movie Mugadziri akagadzirwa muna 1995, nhau dziri so-so. Pane nguva imwe chete. Mumakore makumi maviri nematanhatu aya, hapana…
Unogona kutenga USB Type-C 2.1 tambo muzvitoro zvine hunyanzvi
Iyo USB Type-C 2.1 standard icharamba iripo. Iyo tekinoroji yakatenderwa muna 2019 yakagamuchira kuita zvine musoro. Kunyangwe akawanda…
USB Type-C ndiyo chiyero chekuchaja midziyo ye2022
European Commission yakabvumidza mwero mutsva mumusika weIT. Izvo zvine chekuita nemhando yekubatanidza yekuchaja nharembozha. Format...
VPN - chii ichocho, zvakanakira uye zvisingabatsiri
Kukosha kwesevhisi yeVPN kwakawedzera muna 2022 kusvika padanho zvekuti hazvigoneke kufuratira iyi nyaya. Vashandisi vanoona...
Canon EOS R, Rp uye M50 Mark II isina magirazi makamera e2022
Musika wezvigadzirwa zvehunyanzvi zvemifananidzo uchazadzikiswa nezvitsva zvitatu kubva kuJapan brand Canon. Kutanga muna 2021, mugadziri…
Washing vacuum cleaner UWANT B100-E - yakanakisa tsvina yekuchenesa
Kuwacha vacuum cleaners hakuchashamisi chero munhu. Anenge ese yechipiri mudziyo pamusika wemidziyo yemumba yekuchenesa une basa ...
Metaverse - chii ichocho, sei kusvika ikoko, chii chakakosha
Iyo Metaverse ichokwadi chaicho uko vanhu vanogona kudyidzana munguva chaiyo kune mumwe nemumwe kana nezvinhu,…
Otomatiki rekodhi mutambi Pro-Ject otomatiki A1
Iyo Pro-Ject Automat A1 chikamu chemutsara mutsva wekupinda-level otomatiki turntables. Akananga ku...
Beyerdynamic DT 700 PRO X - pamusoro-nzeve mahedhifoni
Chinhu chikuru chemutsara mutsva wenyanzvi yakazara-saizi DT PRO X mahedhifoni ndiyo STELLAR.45 inzwi emitter. Hazvisi nyore…
LG XBOOM Go PL7 - inotakurika mutauri
Mijia Electric Precision Screwdriver
Kusaona zviri mberi kwevakuru veSouth Korea kunogona kuvadzosera kumashure
Chinhu chinogadzira mvura kubva kumhepo mugwenga